'व्यवस्था बदल्ने होईन, अवस्था बदल्ने राजनीतिको आरम्भ हुनुपर्छ' : खिमलाल देवकोटा - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘व्यवस्था बदल्ने होईन, अवस्था बदल्ने राजनीतिको आरम्भ हुनुपर्छ’ : खिमलाल देवकोटा
Posted by Headline Nepal | १५ पुष २०७३, शुक्रबार १३:०९ |
नेपालमा नयाँ राजनितिक अध्यायको सुरुवात गर्ने भन्दै नयाँ शक्ति नेपाल देशभरी विभिन्न कार्यक्रम गर्दे आफ्नो संगठन विस्तारमा लागेको छ । मुलुकको संविधान २०७२ सावैजनिक हुनेबितिकै दशकौ देखि माओवादी राजनीतिमा लागेका डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा अहिले नयाँ शक्ति नेपालको पार्टी घोषणा गरेर नयाँ राजनीतिक कोर्सको सुरुवात गरिएको नयाँशक्ति नेपाल दावा गर्छ । सो अभियानमा तत्कालिन एकिकृत माओवादीका केन्द्रिय सदस्य,संसदिय दलका सचिव तथा सभासद खिमलाल देवकोटा नयाँ शक्ति नेपालको प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख तथा पार्टी प्रवक्ताको रुपमा रहेका छन । पार्टीको एक प्रभावशाली नेताका रुपमा रहेका देवकोटासंग नयाँ शक्ति नेपालको अहिलेको गतिविधि र भावी कार्ययोजनाको विषयमा हेडलाईन नेपालले कुराकानी गरेको छ ।
अहिले नयाँ शक्ति नेपाल स्थापनापछि कुन ढंगले अघि बढिरहेको छ ?
नयाँ शक्ति पार्टी एउटा वैकल्पिक राजनिति हो । वैकल्पिक पार्टी हो । त्यो वैकल्पिक राजनीतिको आरम्भको चरणहरु छन् । खासगरी पार्टी घोषणको बखत एउटा चरणमा हामीले भव्य तयारी गयौँ र पार्टी घोषणा गर्यौँ । त्यसपछि पार्टी घोषणा गरिसकेपछि हामी पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा लागेका छौँ । अहिले पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा हामीले छ महिनाको समय निश्चित गरेका छौँ । त्यो छ महिने अभियानका निम्ति हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरु, विभिन्न योजनाहरु पुरा गर्नका निम्ति कार्यसमिति तथा पदहरु बनाएर हामी अघि बढ्दै छौँ । यो क्रममा हामीले अहिलेको मंसिर देखि जेठसम्म ५ महिनाको अवधि निश्चित गर्यौँ । र पहिलो २ महिनाको अवधि , मंसिर र पुसमा बैठक, योजना सम्प्रेषण लगायत चरणका रुपमा कार्य गरिरहेका छौ । त्यसपछि माघ, फागुन र चैत तिनमहिनाको अवधी हामीले एक्सनमा जाने, परिणाम निकाल्ने, संगठन विस्तार गर्ने र त्यो लगायतका कामहरु गर्नेछौँ । तेस्रो चरण बैशाख र जेष्ठमा हामीले निर्वाचनको तयारी गरेको छौँ । निर्वाचनको तयारीमा दुई वटा निर्वाचन एउटा राज्यको निर्वाचनको हिसाबले, निर्वाचनमा सहभागी हुने र श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरा र कथम्कदाचित् राज्यको निर्वाचन हुन सकेन भने हामी पार्टीको निर्वाचन गरेर प्रत्यक्ष निवार्चीत केन्द्रको कार्यसमिती, प्रदेशको कार्यसमिती, र स्थानिय तहको कार्यसमिती निर्धारण गर्ने गरी हामी अगाडी बढेका छौँ । यसका निम्ति हामीले चारवटा मुख्य काममा फोकस गरेका छौँ पहिलो काम हामीले सदस्यता विस्तार र संगठन सुदृढिकरणको काम नै हो । त्यो गर्छौँ, त्यसका निम्ति हामीले केन्द्रिय कार्यसमितीलाई जिल्लाको उत्पेरकको रुपमा हामीले त्यहाँ पठायौँ । ताकि केन्द्रिय सदस्यहरुलाई केन्द्रिय अभियन्ताका रुपमा पठाएका छौँ साथै केन्द्रिय परिषदका पदाधिकारीहरुलाई हामीले स्थानिय तहको उत्प्रेरकको रुपमा पठाएका छौँ , त्यसपछि त्यो भन्दा तलका साथीहरुलाई वडा स्तरसम्म पुर्याउने गरी घरघरमा नयाँशक्ति यो नाराका साथ हामीले कार्य गरेका छौँ । यसले कम्तिमा पनि तिन लाख पार्टी सदस्य बनाउने योजना बनाएका छौँ । यदि तिन लाख पार्टी सदस्य बनायौँ भने हामीले यो नारा शुशासन र समृद्धिको नारा तिन लाख पार्टी सदस्यले बोक्ने स्थितीको बनायौँ भने यो पार्टी नेपालको एक नम्बर पार्टी बन्छ । हामीले संगठनका हिसाबले यसरी निर्धारण गरेका छौँ । दोस्रो हामीले यो व्यापक पार्टीहरुबिच ध्रुविकरण, एकिकरण र एकताको प्रक्रियालाई आरम्भ गर्नुपर्छ भनेर दोस्रो मुख्य काम हामीले निश्चित गरेका छौँ । त्यो कामका निम्ति हामीले के ठानेका छौँ भने अहिलेसम्म परम्परागत दृष्ट्रिकोणले पार्टी चलाउने तरिका धेरै मानिसहरुलाई मन पर्न छोडेको छ । ठुलो युवा जमातले अहिलेको राजनितिप्रति वितृष्णा जगाएका छन् । राजनितिलाई फोहोरी खेल भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् त्यो के कारणले पुगे भने राजनिति आफैँमा फोहोर खेल हैन राजनिती जसरी सञ्चालन गरियो त्यसरी सञ्चालन गरेको कारणले युवाहरुको ठुलो जमात त्यसको वितृष्णामा छ । जीन्दगीभर राजनिती गरेको मान्छेहरुपनि आफ्नो पार्टीप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
अहिले पछिल्लो समय जनताले चाहना गरेका थिए की नयाँ राजनैतिक दलहरुबाट केही हुन्छ तर समग्र नागरिकले चाहना व्यक्त गरिरहँदा जुन पार्टी आए पनि उहि त होनी भनेजस्तो देखिएको छ नि
हो, हामीले सबै पार्टीहरु भित्र रहेका असल मान्छेहरुलाई वार्ता, संवादको प्रक्रिया मार्फत धु्रविकरण र एकिकरण गछौँ र जजसले राजनितीलाई फोहोरी खेल भने ति युवा जमातलाई पनि राजनितिमा नलागेकालाई पनि सहि राजनिति संप्रेषण गछौँ । राजनिती भनेको सेवा हुनुपर्ने थियो देश र जनताको सेवा हुनुपर्ने थियो तर पेसा बनिदियो । राजनिती गर्ने मानिसलाई तँपाईको पेशा के हो ? भनेर सोध्यो भने गर्वका साथ राजनिति हो भन्छन । जब राजनिती पेशा नै हो भने त पेशाले त आर्जन गर्छ, कमाई गर्छ, उत्पादन गर्छ । के उत्पादन गर्ने भन्दा उसको फ्याक्ट्रि, उद्योग कलकारखाना त केहि छैन । उद्योग, पेशा भन्दै उसले राज्य सञ्चालन गर्छ, राज्य दोहन गर्छ, कमिसन खान्छ र ठेक्का खान्छ, घुस खान्छ, सरुवा बढुवामा कमिसन खान्छ र त्यसैलाई उसले पेशा ठान्दछ । त्यस्ता खालको राजनितिका कारणले वितृष्णा बनेको छ । त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भने अहिले भैरहेको राजनीति सच्चाउन। शुद्ध बनाउन चाहन्छौँ । र राजनिती सहि देश र जनताको सेवा गर्ने साधन हो भन्ने बनाउन चाहन्छौँ । त्यो पक्रियाका निम्ति पनि हामीले एउटा छुट्टै कमिटि बनाएका छौँ । यसलाई दोस्रो महत्वुर्ण कामको रुपमा हामीले छुट्टाएका छौँ । यो सँगै बार्ता तथा ध्रुविकरणको काम दोस्रो हुनेछ । तेस्रो कामा सामाजिक, राजनितिक मुद्धाहरु छन् ति एकदमै ओझेल परेका छन् । जस्तो अहिले सँविधान संसदमा सँविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएकोे छ, लोकमान विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव छ । सँविधानलाई सँशोधन गरेर सबैको अपनत्व, स्थायित्व कायम गर्ने कुरा र कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी छ । माघ ७, २०७४ भित्रमा या संसदको अवधी सकिन्छ, त्यो भन्दा अगाडि तिन सय भन्दा बढि कानुनहरु निर्माण गरेर निर्वाचनमा जानु छ । तर राजनिती कता गएको छ ? कुर्सिको खेलमा । लामो समयदेखि संसद बन्द भैरहेको छ । सडक बन्द भैरहेको छ , बन्द विरोधी अभियान सञ्चालन गरेका पार्टीहरु आज सडक बन्द र टायर बाल्ने काम गरीरहेका छन् ।
उल्टो दिशातिर अगाडी बढेको छ, त्यसकारण हामी के भनीरहेका छौँ भने सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने माध्यमबाट हामी के भन्छौँ भने मुलुकको यो अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति, स्थिरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔँ । त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको त्यो अभियानलाई हामीले जनमतको प्रक्रियाद्धारा, ठुला आन्दोलनका पक्रियाबाट, हस्ताक्षरको माध्यमद्धारा, एसएमएसको प्रक्रियाद्धारा, र अन्तिममा गएर सत्याग्रहको चरणसम्म पनि पुर्याउँ । त्यस्ता राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा जसले स्थिरता, शान्ति, विकास र स्वाधिनता समेतलाई पनि असर गर्दछ, यस्ता मुद्दाहरु उठाउने कामलाई हाम्रो तेस्रो महत्वपुर्ण हामीले यसलाई भन्यौँ । चौथो महत्वपुर्ण काम निर्वाचन हो, त्यसकारण यो प्रक्रियाअनुसार नयाँशक्ति पार्टी केन्द्रित भएर आफ्ना गतिविधीहरुलाई अगाडी बढाईरहेको छ । यहि सन्दर्भमा तपाईँले अघि जुन जोगि आएपनि कानै चिरेका, यो पनि राजनिति त्यो पनि राजनिति उस्तै त होला भन्ने जुन जनतामा गहिरो अविश्वास खडा भएको छ, त्यो गहिरो अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्ने चुनौति पनि नयाँ शक्ति पार्टीले सामना गर्नुपर्दछ । यसरी सामना गर्दाखेरी राजनिति किन अविश्वासिलो भयो ? राजनितीप्रतिको मानिसको वितृष्णा भयो भन्दाखेरी, राजनितीको आफ्नो दोष कति होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, समय अत्यन्त गतिवान छ, विकास भएर अगाडि दौडिरहेको छ, तर राजनिति स्थिरतामा रह्यो । नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरी ७० वर्षमा पहिलोपटक राजनैतिक एजेन्डा परिवर्तन भयो । भने आजसम्मको राजनिति राणाशासन, राणासँग लड्ने, पञ्चायतसँग लड्ने, ज्ञानेन्द्रसँग लड्ने , लड्ने बाहेक अर्को राजनिति नै हुँदैन थियो । व्यवस्था बदल्नका निम्ति लड्नु ठिक थियो, तर ७० वर्षसम्मको नेपाली राजनितिले लड्नमात्र सिकायो । अब सँविधान सभाबाट सँविधान जारी भएपछि अब व्यवस्था बदल्ने होईन अवस्था बदल्ने राजनितिको आरम्भ हुनुपर्छ ।
अरुभन्दा पृथक ढङ्गले चाहिँ नयाँ शक्ति अगाडी बढ्दैछ भन्दै हुनुुहुन्छ, त्यसको लागि एउटा आधार तयार पार्नुभएको बताईरहदा त्यो किसिमको गतिविधी त देखिँदैन । जनस्तरमा परिवर्तन आउने किसिमको राजनिति खोज्नुभाको कि भाषणिय राजनिति खोज्नुभएको हो ?
नेपाली राजनितिको एउटा चरण समाप्त भयो, व्यवस्था परिवर्तनको एउटा औचित्य समाप्त भयो अब किनभने राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, एकात्मक ठाउँमा सँघियता, हिन्दु अधिराज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता, एकल राज्य सत्ताको ठाउँमा समावेशीता आईसकेको छ । त्यसैले अब अवस्था परिवर्तन गर्ने राजनिति आरम्भ भयो । अवस्था परिवर्तन गर्ने राजनितिका निम्ति हिजो व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति बनाईएका पार्टी, नेतृत्व, निति, सँरचना, कार्ययोजना, जस्ताको तस्तै अगाडी जान सक्दैनन् । माछा मार्ने हतियार मृग मार्नका निम्ति काम लाग्दैेन । त्यसकारण अरु पार्टीहरुले त्यहाँनेर गल्ति गरीरहेका छन् , जब यी पुरानै तरिकाले अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पुराना पार्टीहरुले गरिरहेका छन् । त्यो गल्ति गरिराखेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टीले अब एजेण्डा बदलियो, बदलिएको एजेण्डा परिपुर्ती गर्नका निम्ति नयाँ निति, नयाँ कार्ययोजना र नयाँ श्रृङ्खलाका साथ अगाडी बढ्नुपर्छ भनेर पहिला हामी नितिगत हिसाबले प्रस्ट हुँदै, प्रस्ट बनाउँदै जाने अवस्थामा छौँ । दोस्रो, यो वैकल्पिक राजनिति हो । वैकल्पिक राजनितिका केहि सिद्धान्तहरु हुन्छन्, नयाँ शक्तिको सिद्धान्त भनेको हामी जे भन्छौँ त्यो गछौँ हो । यदि हामीले जे भन्छौँ त्यो गरेनौँ भने हामी नयाँ शक्ति हुँदैनौ, अथवा हामी पुरै नयाँ शक्ति भैसकेका रहेनछौँ भन्ने जाने हुन्छ । एउटा कुरा हामी जे भन्छौँ त्यो गछौँ, दोस्रो कुरा हामीले हाम्रै जिवनकालमा सम्भव छ त्यो गर्छौँ, हिजोका राजनैतिक दलहरुले भविष्यको, विगतको ८० प्रतिशत बखान गर्ने, २० प्रतिशतमा सुदुर भविष्यको कुरा गर्ने र वर्तमानको कुरामा शुन्य हुने त्यसकारण विगतका राजनितिहरु असफल भए ।
अब विगतका राजनितिहरु जस्ताको तस्तै अघि बढ्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षका आधारमा हामी के भन्दै छौँ भने वर्तमान सबैभन्दा महत्वपुण अवधि हो । ‘PAST IS PAST, FUTURE IS UNCERTAIN SO THE MOST IMPORTANT TIME IS PRESENT TIME’ भनेजस्तै हामीले अहिले के गर्ने भन्ने खोजिरहेका छौँ । जनताले पनि अहिले के गर्ने खोजिरहेका छन्, नयाँ शक्ति पार्टीले पनि अहिले के गर्ने खोजिरहेको छ ? चौथो कुरा वैकल्पिक राजनितिको सिद्धान्त के हो ? भने आजसम्मको राजनितिहरुलाई आलेचना गर्ने, आफ्नो पार्टीे कुरा गर्ने होईन अरु पार्टीको आलोचना गर्ने राजनिति हो । नयाँ शक्ति पार्टी त्यसलाई खारेज गर्दछ । हामी के भन्दछौँ भने तपाईसँग सिमित समय छ, तपाईसगँ भएको समय तपाईको पार्टीले गरेको राजनितिको बारेमा भन्नका निम्ति मात्रै प्रयाप्त छ । यदि तपाईँ आफ्नो पार्टीको कुरा छोडेर अरु पार्टीको आलोचना मात्र गर्न जानुभयो भने तपाईले नराम्रो गल्ति गर्नुभयो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसकारण हामी अरुको आलोचना गर्दैनौँ । सिमित अवधीमा हामी आफ्नो कुरा भन्छौँ । त्यो मात्र नभई हामी आफ्नो कुरा गर्छौँ । गर्ने कुरा के हो ? भन्दा अहिले जनताले के खोजेका छन् भने सुख, सम्वृद्दि खोजेका छन् । केहि नभए पनि जन्मिएको बच्चाको राम्रो उपचार होस् त्यसपछि उसले राम्रो शिक्षादिक्षा पाओस् ।
शिक्षदिक्षा पाईसकेपछि उसले राम्रो जागिर पाओस् । जागिर पाईसकेपश्चात एउटा यस्तो तलब होस् उसले अ–आफ्नो सानो परिवारलाई सुखका साथ बसाउन सकोस् । बस्नलाई घर होस्, विमारी भएको समय उपचार गर्न पाईयोस्, वस यत्ति खोजेको छ, त्यो भन्दा अरु खोजेको छैन । यसको यस्तो वातावरण चाहिया कीे जसले समृद्ध समाज सृजना गरोस्, जसले बेरोजगारी अन्त्य गरोस् । बेरोजगारीको अन्त्य मात्र गरेर पुग्दैन भष्ट्रचार छ , व्यापक रुपमा भष्ट्रचारको कारणले यहाँ कहिँ अकुत सम्पति थुप्रने कहिँ चाहिँ खान लाउन नपाउने स्थिती बनेको छ । त्यसकारण भ्रष्टचारको अन्त्य गर्ने , सुशासन कायम गर्ने काम गर्छौँ । फेरी हामीले भनेका छौँ आलोचना गर्दैनौँ त्यसैले भ्रष्ट भए भनेर अरु कसैलाई औँला ठड्याउँदैनौँ । हामी भष्ट्रचारको अन्त्य र शुसासनको सुरुवात हामी आर्फैँ गर्नेछौँ ।
तपार्इँले शुसासनका कुराहरु र भष्ट्रचार निर्मुलिकरण गर्ने कुराहरु र अन्य राजनैतिक घटनाक्रमहरुलाई जसरी अन्य राजनैतिक दलहरु भन्दा अलि पृथक हिसाबले जान खोजेको बताउँदै गर्दाखेरी पार्टी घोषणा भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि नयाँ शक्ति फेरीपनि राजनैतिक सिद्धान्तमै अड्किन खोजेको हो की, जनताको सरोकार तिर लागिरहेको हो , त्यो प्रष्ट हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ नि होईन र ?
पार्टी घोषणाको अवधीमा एउटा ढङ्गले हामी लाग्यौँ, अब हामी दर्ता गरिसकेपछि यसलाई हामीले पार्टी निर्माणको अभियानको रुपमा अघि बढाउँदै छौँ । पार्टी निर्माणको अभियानको बेलामा अरु पार्टीको जस्तो कोरा भाषण गर्ने कुरामात्रै हामी गरीरहेका छैनौँ । पार्टी स्थापना त हामी गर्छौँ तर के आधारमा गर्छौँ भने हामी अरु पार्टी भन्दा फरक रुपमा, हामी वैकल्पिक रुपमा गर्छौँ । यो मुलुकले समृद्दि खोजेको छ , जनताले समृद्दि खोजेका छन् । हामीसँग समृद्दिको योजना छ । यो मुलुकको राजनिति असाध्यै भ्रष्ट भयो , त्यो राजनितिलाई हामी सच्याउन चाहन्छौँ , यो योजनाका साथ हामी अगाडी बढ्दै छौँ । त्यसो भएको हुनाले विस्तारै यसले गति लिँदैैछ, सँगसँगै अर्को पनि नेपालको समस्या के हो भने उद्यमशिलताको अभाव, जनता, युवा राम्रो पढेका छन् , पढिसकेपछि उसको पहिलो चाहना के हुन्छ भने जागिर हुन्छ, मैले राम्रो जागिर कहाँ पाउँछु भन्ने चाहना । हामीले कस्तो बनाउन पर्यो भने राम्रो पढिसकेपछि सिप आर्जन गर्नुपर्यो त्यो आर्जन गरिसकेपछि मैले उद्यम कसरी गर्ने ? आफुले जागिर कसरी सृजना गर्ने ? अरुलाई जागिर कसरी दिन सक्ने ? भन्ने बनाउनुपर्यो । जागिर माग्ने र दिने अवस्थामा आफु रहने , माग्ने र दिने यो दुईओटा अवस्थाको सृजना गर्न सक्ने क्षमतावान युवा बनाउने राजनिति हामी सुरु गर्दैछौँ । त्यसकारण यो विल्कुल फरक छ, त्यसकारण यसको अहिले परिणाम देखिएको छैन होला, तर परिणाम पनि हामीले पार्टी दर्ता गर्न जाँदा खेरी , हामीले यो अवधिर हामीले गरेको पार्टिको खर्च विवरण समेत बुझायौँ । निर्वाचन आयोगमा यो खर्चविवरण बुझाउँनु पर्दैन बल्ल दर्ता हुँदै हुँदैहुनुन्छ, अब बाट बल्ल चाहिँ हामीलाई अडिट विवरण बुझाउँदा हुन्छ भनियो, हामीले भन्यौँ हामीले पार्टी आरम्भ गरिसकेपछि यो व्यक्तिगत मामिला होईन हामी राष्ट्रका हौँ त्यसकारण हामीले राख्यौँ । त्यो राखेलगत्तै अब पार्टीहरुले व्यालेन्स सिट बुझाउनुपर्छ भन्ने व्यापक लहर भयो । त्यो गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगमा आफ्नो आय व्यय विवरण बुझाउन नसकेको कारणले एउटा पार्टी खारेज भयो । त्यति बेला बहालवाला मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । यस्ता खालका केहि प्रभावले हामीले भ्रष्ट्राचार, राजनितिलाई पेसा बनाउनुहुँदैन, राजनितिक पार्टीलाई भ्रष्ट्रचारको केन्द्र बनाउनु हुँदैन, स्वच्छ ठाउँ बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दा अरु सबै अपारदर्शी गतिविधी गरिरहेका पार्टीहरुलाई त्यो पार्टीभित्र सकारात्मक सन्देश गएको छ भन्छु म ।
नयाँ शक्ति नेपालले आफ्ना मुद्धाहरुलाई नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गरीरहँदाखेरी आम जनतामा के मनमा छ भने नयाँ शक्तिका जो संयोजक हुनुहुन्छ उहाँ नै टेस्टेड भईसकेका नेता हुनुहुन्छ, जति पनि देखिएका अनुहारहरु छन् ति सबै टेस्टेड गरीसकेका नेताहरु छन्, तिनीहरुबाट हामीले के अपेक्षा गर्न सक्छौँ ?
स्वभाविक रुपमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भईसकेको मान्छे हुनुभयो । तर प्रधानमन्त्री भईसकेका समकालीन नेताहरु मध्ये प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको मुल्याङ्कन गर्दा एउटै मात्र आशा गर्न सकिने, विश्वास गर्न सकिने, भिजन भएका नेता, अवसर पाउँदा र गर्न पाउँदा मुलुकलाई केहि गर्न सक्ने नेताका रुपमा उनलाई चिनिन्छ । टेस्टेड नेताका रुपमा पनि उनलाई सफल नेताका रुपमा चिनिएको छ । अरु प्रधानमन्त्री चाहिँ टेस्टेड भएर पनि काम गर्न नसक्ने तर जनताको तहमा बाबुरामले मौका पाउँदा गर्छन भन्ने स्थिती बनेको हुनाले हामी सकारात्मक रुपमा जनताले टेस्ट गरेर पनि रुचाईएका प्रधानमन्त्री हुन्, अर्को कुरा टेस्टेडकै अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने मान्छेको, पार्टीको, राजनितिको, दृष्टिोणको कुरा हुन्छ, एजेण्डाको कुरा हुन्छ, एजेण्डा र दृष्टिकोण जनपक्षीय, जनताका मनमा भिजेका एजेण्डाहरु लिइयो, पुराना नेता नै नयाँ हुन्छ,त्यसकारण एउटा कुरा विश्वसनिय तथा आश भएका नेता र दोस्रो कुरा नयाँ शक्तिले नेपालको राजनिति परिवर्तन, राजनैतिक अवस्था परिवर्तन भएको छ । जनताका मन मस्तिस्कमा रहेका एजेण्डाहरुलाई यसले बोकेको छ । यी दुईवटाको संयोजनले नयाँ शक्ति अरु पार्टीहरुको तुलनामा वैकपिक पार्टी, अरु राजनितिक पार्टीहरुको विकल्पको रुपमा स्थापित हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
नयाँ शक्ति नेपालमा घोषणा पछाडीका दिनहरु सरसर्ती हेर्दा तत्कालिन एनेकपा माओवादीबाटै फुटेर आएको एउटा टिम जस्तो देखिन्छ पछिल्ले समय विभिन्न राजनैतिक दलहरु र समुहबाट पार्टीमा प्रवेश गराउने क्रममा कतिपय केन्द्रिय तहका नेताहरु विवादास्पद ढङ्गका कार्यहरु गर्दै गर्दा यसले नयाँ शक्ति नेपालले जसलाइ पनि प्रवेश गराइदै गर्दा पार्टीमा फेरी त्यहि किसिमको एउटा अराजकता ल्याउदैछ भन्ने शँका पनि उब्जीएको छ नी ?
नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीमा पुस ४ गतेसम्मको आँकडा हेर्दाखेरी ३५ ओटा समुह हामीमा समायोजन भएका रहेछन् । ति समुहहरु संलग्न भएर नयाँ शक्ति पार्टी निर्माण क्रममा छ । दोस्रोे कुरा नयाँ शक्ति नेपालमा तिन थरी मानिसहरुको जमघट छ । एउटा पुर्व माओवादीहरुको समुह जुन एक तिहाई भन्दा कम छ, दोस्रो एकतिहाई बराबरको विभिन्न राजनैतिक पार्टीमा आवद्ध जमात, र तेस्रो भनेको एकतिहाई भन्दा बढि विभिन्न क्षेत्रका जस्तैः कलाकारहरु प्रशासकहरु, सामाजिक कार्यमा लागेकाहरुको जमात छ, जुन पहिला राजनितिमा लागेका थिएनन् । त्यसकारण हाम्रो पार्टीको एकताको सुत्र के हो भने हामीले निर्धारण गरेको ५स पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त हो, त्यसमा सबैको सहमति छ , त्यसकारण सहमति भएरै ३५ ओटा पार्टी एकतामा आएको हो । दोस्रो कुरा, नयाँ शक्तिका आधार तत्वहरु भनेको वैचारिक राजनितिक दस्तावेज हो । तेस्रो कुरा, राजनिति भनेको यस्तो जादुगर हतियार हो, जसले बेस्ट ब्रेनहरुलार्ई एक ठाउँमा ल्याउँदछ । सबै प्रतिभाहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने, देश र जनताको सेवा गर्ने, साधनको रुपमा विकास हुन सकेमा त्यो राजनिति हा,े तर त्यसो गर्न सकेन भने राजनिति हुँदैन, राजनैतिक पार्टी हुँदैन । त्यसकारण हामी त्यो गर्ने प्रक्रियामा छौँ । चौथो कुरा, नयाँ शक्तिमा रहेका मान्छेहरु पनि विवादास्पद हुने अवस्था हो कि भनेर भन्दै गर्दा म के दावी गर्दिन भने नयाँ शक्ति पार्टी नेपालमा आउने बित्तिकै सबैले दुधले नुहाएका हुन्छन् भनेर म दावा गर्दीन । तर हाम्रो अपेक्षा नयाँ शक्ति पार्टीमा आईसकेपछि आचरण र व्यवहार हामीले जे शपथ खाएका छौँ त्यो अनुसार हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दैगर्दा धेरै ठुलो सङ्ख्या सकारात्मक सँस्कार विकास गर्ने कुरातर्फ प्रतिबद्ध भएकाहरुकै छ । एकाध त्यस्ता केहि चर्चाहरु आए भने त्यो यहि समाजको उपज हो , त्यसैले नयाँ शक्ति पार्टीमा पन नहुने कुरा भएन । तर त्यो नभई हामी जान्छौँ भन्ने अपेक्षा छ ।
समसामयीक राजनिति घटनाक्रम अहिले जसरी मोडिईरहेको छ सरकारमा रहेका राजनितिक दलहरु विपक्षीलाई पेलेर जाने , त्यसैगरी सत्तासीन दलहरुको कुनै पनि भनाई विपक्षीले नमान्ने त्यो किसीमका एउटा माहोल सिर्जना भएको अवस्थामा नयाँ शक्ति नेपालले त्यो मध्यस्थता गर्न सक्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन ?
यतीबेलाको राजनैतिक परिस्थिती कस्तो अप्ठ्यारोमा परेको छ भने संविधान जारी भएको एक वर्ष भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । किन कार्यान्वयन हुन सकेन भन्दा सँविधानको अपनत्व र स्वामित्व स्थापित हुन सकेन, त्यसका निम्ति सँशोधन अपरिहार्य छ । एक वर्ष भन्दा बढि अवधी सँशोधनको गित गाएर मात्र सकिएको छ । सँशोधन दर्ता भएको छ, सदन बन्द भएको छ । सदनमा लोकमानसिँह कार्कीको फाईल प्रवेश गरेको छ तर टुङ्गो पाएको छैन । अवधी अत्यन्त छोटो छ, यो छोटो अवधीमा यसलाई नियमित रुपमा न्यनतम ३०० जति कानुन बनाउनुपर्ने र चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थाको बिचमा राजनैतिक दलहरुले चिन्ता गरेका छैनन् । चिन्ता छ त केवल कुर्सीको मात्रै छ । अनि झगडा के को बनाईएको छ भने संविधान संशोधन भनेको अपरिहार्य छ या संविधान संशोधन वाईयात हो भन्ने यी दुई अतिवादी कोणहरुबाट आएका छन् । यस्तो समयमा नयाँ शक्ति पार्टीले संविधान संशोधनको विषयमा नयाँ शक्ति नेपालले पहल गरीराखेको छ । यो कसरी लिईराखेको छ भने संविधान भन्दा संशोधन जेठो, जारी हुनुभन्दा अगाडी यी यी विषयहरु पुगेका छैनन्, असन्तुष्टीहरु छन् , यी असन्तुष्टीहरुलाई संम्बोधन नगरे कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसकारण अहिले जारी गरौँ, त्यो भन्दा अगाडी मात्रै संशोधन गरेर यो संविधानलाई पुर्णता दिऔँला भनेर भनिएको थियो । त्यो भनिएको कारणले योे अवधी लामो अवधी, अघिल्लो सरकार र अहिलेको सरकारको नी मुख्य एजेण्डा भनेको संविधान संशोधन भएको छ । त्यसकारण संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । अपरिहार्य के का लागि छ भने यसले खासगरी मधेश, थारु, जनजाती, महिला, मुस्लिम र दलीतहरुको प्रतिनिधित्वलाई यसले ग्यारेण्टी गर्दैन । त्यसमा संशोधन गर्नु जरुरी छ, । सिमाङ्कन सिद्धान्तमा आधारित सिमाङ्कन भएकै छैन, सँविधान सभाको, राज्य पुनर्संरचनाको राज्य समितीले तय गरेको, सर्व समितीले तय गरेको, पहिचानका पाँच आधार, सामथ्र्यको चार आधार भनिएको थियो, त्यो चार आधारको कुनैपनि आधार नभेटिने प्रदेश बनाईयो । त्यसकारण सिमाङ्कन परिमार्जन गर्न त जरुरी छ छ, ।
अनि अहिले अस्थिरता यसरी झाँगिएर आएको छ, यो अस्थिरताको एउटै औषधी स्थिरता हो, त्यो स्थिरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, त्यो नियम ल्याउन जरुरी छ । त्यसकारण अहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबुलमा दर्ता हुनुभन्दा अगाडी नयाँ शक्ति पार्टीले आन्दोलनरत पक्ष र सत्ताशिन पक्ष दुई पक्षलाई भेटेर समाधान हुनेगरी सँशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुहोला भन्यौँ । तर त्यती भन्दाभन्दै पनि समाधान हुनेगरी उहाँहरुले दर्ता गराउनुभएको छैन । संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुभएको छैन तैपनि नयाँ शक्ति नेपाल के ठान्दछ भने यो एक कदम सकारात्मक हो । कम्तिमा अहिलेको असन्तुष्टीहरुलाई संम्बोधन गर्ने, सबैको स्वामित्व कायम गर्ने, अपनत्व कायम गर्ने प्रक्रियामा एक कदम अगाडी बढेको छ । अब योे संशोधन प्रस्ताव विधीगत रुपमा टेबुल गरौँ । टेबुल गरिसकेपछि त्यसमा पनि परिमार्जन गरेर सबैको स्जामित्व स्थापित हुने गरी जाऔँ भनेर फेरी पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, आन्दोलनरत पक्षलाई भेट्ने, अरु सबै दलहरुलाई भेट्ने गरेर हामीले त्यो कोसिस गरिरहेका छौँ । तेस्रो काम हामीले हेक्का के दिलाएका छन भने त्यो सँविधान ठिक या बेठिक भनेर तपाईँहरु एउटा कित्तामा उभिन ठिक छैन । किनभने हिजो तपाईँहरु एकै ठाउँमा संविधान संशोधन गनुपर्छ भनेर बस्नुभएको छ । दोस्रो कुरा जेजे विषयमा असन्तुष्टि छ भनिएको छ, पालैपालो सत्तामा भएको बेला तपाईँहरुले यी असन्तुष्टि जायज हुन् हामी सम्बोधन गछौँ भन्नुभएको छ । जतिबेला तपाई सत्तामा रहनुहुन्न अनि फरक ढङ्गले तपाईँलाई बोल्ने गर्नुभएको छ, त्यसो गर्ने छुट तपाईँलाई छैन भनिरहेका छौँ । चौथो कुरा नेपालको वास्तविकता के हो भने स्थिरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल्याउनुहोस् जसलाई संविधान संशोधनमा छुटाउनुभएको छ । यो मात्र ल्याउनुभयो भने २ वटा कुराको समाधान एकैचोटी हुन्छ ।
एउटा अस्थिरताको समस्या समाधान हुन्छ, अर्को वैदेशिक हस्तक्षेपको समस्या समाधान हुन्छ । त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल्याईदिनुस् , तपाईले पहिलो सँविधान सभाको समितीमा सहमत गरेको पहिचान र पुनर्सँरचनाको सिमा निर्धारण गर्ने भनेर जे भन्नुभएको थियो त्यसमा ईमान्दार भैदिनुहोस् । त्यसका आधारमा र असन्तुष्ट पक्षहरुसँग वार्ता गरेर सहमति जुटाउनुस् भनेर नयाँ शक्ति पार्टी ले समाधानको उपाय पनि दिएको छ । र उहाँहरुलाई मध्यस्थता गर्न कोसिस पनि गरेको छ । दुवै पक्षलाई भेटेको छ, प्रेरित गरेको र हामीले के सुत्र बनाको छौँ भने विभाजन, शान्ति र स्थिरता दिन सक्दैन, दिने चिज होईन । समाधान अहिले जनताले खोजेका छन्, देशले खोजेको छ । जे गर्दा तपाईहरुको असन्तुष्टि समाधान हुन्छ, त्यो समाधान गर्नका निम्ति सरकार तत्पर हुनुस् ।
विशेष गरी नागरिकता, राज्यसभा र प्रान्तीय सभाहरुको विषयमा त्यति ठुलो किसिमको मतभेद नदेखिए पनि सिमाङ्कनको विषयलाई बढि प्राथमिकता दिएर सबै राजनैतिक दलहरुले आआफ्नो किसिमले आवाज उठाईरहेका छन् । तर संविधानमा पनि के भनेको छ भने संघीय आयोगले त्यसको निर्धारण गर्ने भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने हिसाबले निर्वाचनतर्फ जाने, र अन्य विवाद चाहिँ राजनैतिक दलहरुले एक ठाउँमा बसेर टुङ्गाउँदा के बिग्रीन्छ ?
बिग्रने त केहि थिएन तर कुरा के हो भने सबै राजनितिक दलहरुले एक मतले औपचारीक रुपमा संविधान अहिले जारी गरी हालौँ, यो पुर्ण छैन । असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्न तुरुन्त संशोधन गरौँ । संशोधन के–के विषयमा गरौँ भने नागरिकता , राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधीत्वको कुरामा, तथा सिमाङ्कनको कुरामा गरौँ भनेर भनि नै सकेको हो । त्यसमा अपुर्णता छ, ति पुर्णताको निम्ति संशोधन गर्नुपर्छ भनेको हुनाले यो सँशोधन गर्न जरुरी हो । यो संशोधन भएपछि मात्रै संविधानको अपनत्व कायम हुने भो । त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन, निर्वाचन पछि मात्रै हुने भो । त्यसकारण पहिला यो वचनबद्धता पुरा गर्नुपर्दछ । दोस्रो कुरा, सिमाङ्कनको कुरा हो, यो सिमाङ्कनको कुरामा मलाई अचम्म के लाग्छ भने यो भन्दा अगाडीे काङ्ग्रेस र एमालेको सरकारका बेला यहि प्रस्ताव आयो, माओवादीले त्यो प्रस्ताव विरोध गर्यो , त्यसपछि त्यो प्रस्ताव लागु भएन । अहिले त्यहि प्रस्ताव माओवादी र काङ्ग्रेसले प्रस्तुत गरेका छन्, एमालेले भयङ्कर राष्ट्रघात, देश विखण्डन गर्ने भनेको छ । हिजो त्यहि प्रस्ताव एमालेले प्रस्तुत गर्दा एमालेको लागि त्यो राष्ट्रवादी भयो, विखण्ठन पनि नगर्ने भयो बरु समाधान गर्ने भयो ।
आज त्यहि प्रस्ताव माओवादी, काङ्ग्रेसले प्रस्तुत गर्दा त्यो राष्ट्रघाती कसरी हुन सक्छ ? त्यसकारण हाम्रो भनाई के हो भने तपाईहरु जनताको भावनामा खेल्ने काम नगर्नुहोस् , यो दिगो राजनितिकता होइन । तेस्रो कुरामा, यो विषयलाई सम्बोधन गर्न भनेर सुशिल कोईरालाको सरकार, केपि ओलीको सरकार, अहिलेको प्रचण्डको सरकार, सबै सरकारले सरकार बन्दै गर्दा, सरकार बनाउने सहमती गर्दैगर्दा ७ बुँदे, ९ बुँदे, १३ बुँदे बनाउँदै गर्दा पहिलो बुँदा मधेशी र थारुहरुका असन्तुष्टिहरुलाई संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ । त्यसैका निम्ति पटकपटक वार्ता गर्नुभएको छ भने त्यसमा विमति कहाँ नेर हो ? अझ अचम्मको कुरा के लागेको छ भने पहिला एमाले काङ्ग्रेस र माओवादी यी तिनओटै दलका नेताहरुले यो–यो विषयमा असन्तुष्टि छन् हामी संशोधन गरेर सहमति गर्छौँ भने । त्यसपछि बनेको सरकार केपी ओली र प्रचण्डको संयुक्त हस्ताक्षरबाट बनेको सहमती र पहिलो बुँदामा यी–यी बुँदामा असन्तुष्टि छन्, हामी संशोेधन गछौँ भनेर त्यसका आधारमा सरकार बन्यो । ९ महिना त्यो सरकार चलिसकेपछि माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा यो संशोधन गर्ने भनिएको थियो तर संम्वोधन गर्ने कुरामा ओली सरकार ईच्छुक नदेखिएको कारणले अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने भो भन्यो । त्यो अविश्वासपछि गठन भएको देउवा र प्रचण्ड गठबन्धनको सरकारमा हस्ताक्षर भएको ७ बुँदेमा पनि त्यहि चिज सम्बोधन गर्ने भनियो । मधेशवादी दलहरुले अहिलेको सरकारलाई भोट हाल्दा पनि त्यहि चिज सम्बोधन गर्ने भनियो । भनेपछि संविधान सभाभित्र रहेका कुनै पनि दल बाँकि छैनन् , जसले यि विषयहरु सम्बोधन गर्न हुँदैन भनेको । सबैले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेका विषय अहिले कसका निम्ति बाधक बन्यो, कसका निम्ति यसले रोक्यो ?
हामी अबको २०७४ –माघ–७ भित्रमा तिनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितीमा पनि छौँ तर दलहरुको तयारी शुन्य छ भने अब देश कुन बाटोमा जाँदैछ ?
गम्भिर प्रश्न आयो । यसमा मैले सकारात्मक अवस्था देखिरहेको छैन । यसमा दुईटा परिणाम हुन सक्दछन् । एउटा, जेजे भएपनि अहिले सबैलाई सिमाङ्कन हैन सत्ता चाहिएको छ । सत्ता बाँडफाँड मिल्यो भने एउटा समस्या हल हुन्छ । त्यसो भैदियो भने राम्रो हुन्छ किनभने विषयका कारणले होईन कुर्सीका कारणले झगडा भैरहेको छ । कुर्सी मिलीदियोस् । मेरो शुभकामना छ । एउटा सकारात्मक सम्भावना यो छ । अर्को नकरात्मक म के देख्छु भने यदि कुर्सीको भागबण्डा नमिल्ने हो भने सबै दलहरु कुन ठाउँमा पुगेका छन् भने २०७४ माघ ७ आईहाल्छ, कटाईदिने, कटाईदिसकेपछि मुलुक जहाँसुकै जाओस्, त्यो पुरै अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु प्नि डुब्ने र गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समावेशीता, यी सबै उल्टने, त्यसपछि उहि पुरानै प्रक्रिया पुर्नस्थापित हुने, केहि केहि मान्छेहरु सँीवधान २०४७ को पुर्नस्थापना हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, केसहिकेहि मान्छेहरु संघीयता हामीले बाध्यात्मक रुपमा स्विकार गरे का छौँ भनेर नेकपा एमालेकै जिम्मेवार नेताले भन्दैहुनुहुन्छ । यो राजतन्त्र पनि वाध्यताले स्विकार गरेका हौँ पहिला बैशाख ८ गते हामीले सहमती गरेकै होईनौँ, भन्ने ठाउँमा पनि यी नेताहरु पुग्ने खतरा देख्दै छ। ु त्यसकारण अब लेनदेन तिर लैजाउँ, कुर्सीको भागबण्डा मिलाऔँ । चुनाव हुनुभन्दा अगाडी बाहिर बसेर तपाईहरु चुनाव पनि गराउनुहुन्न । चुनाव पनि लड्नुहुन्न । मुलुकलाई भोट हाल्ने अवस्थामा पनि पुर्याउनुहुन्न । त्यो कुरा जानेको कुरा हो । किन भने पहिलो सँविधान सभामा सँविधान किन आएन भन्दा कुर्सीको भागबण्डा मिलेन आएन । दोस्रो संविधान किन आयो भन्दा विषय मिलेर आएन तर कुर्सीको भागबण्डा मिलेर आयो । अहिले सँशोधनको बारेमा लफडा किन आएको छ भने कुर्सीको भागबण्डा मिलेको छैन , जुन दिन कुर्सीको भागबण्डा मिल्छ, त्यो भागबण्डा मिलेको दिनमा यहि प्रस्ताव भयङ्कर राष्ट्रवादी हुनेछ । भनेपछि कुर्सीको भागबण्डा मिलाउनुस्, मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा लैजानुहोस् । अहिलेसम्म भएका उपलब्धिहरुलाई बचाउने दिशातिर लैजानुहोस् ।
अन्तिममा नयाँ शक्ति नेपालको तर्फबाट आम नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मुलुक यतिखेर गम्भिर राजनैतिक संकटबाट गुज्रीएको छ । यो क्षणमा प्रत्यक तहका नागरिकहरुले सकारात्मक सोचका साथ समाधानमुखी राजनिति , समाधानमुखी गतिविधी गरेर मुलुकलाई निकास दिन जो–जो जहाँजहाँ छौँ सबैले भुमीका खेलौँ । यसैमा हाम्रो हित छ । सुखी समृद्ध र स्थिर नेपाल , विकसित नेपाल सबैको चाहना हो । त्यो चाहना पुरा गर्नका निम्ति सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक भुमिका निर्वाह गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
Previousयुवा संघमाथी अर्को प्रहार, अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याई छाड्ने युवासंघ प्रवक्ता कटुवालको चेतावनी
Nextअङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा पोखरा पर्यटकले भरिभराउ
२ जेष्ठ २०७५, बुधबार १७:१८
२८ बैशाख २०७५, शुक्रबार १३:१०
९ पुष २०७४, आईतवार ०८:३४
प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा सपथ ग्रहण
३ फाल्गुन २०७४, बिहीबार १७:०७